လေ့လာရေးခရီးသွား APK ကို | Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » လေ့လာရေးအဖှဲ့
လေ့လာရေးခရီးသွား APK ကို
Google ကလေ့လာရေးခရီးသင်ဦးဆောင်သို့မဟုတ်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော် immersive ကို virtual ခရီးစဉ် join ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ virtual reality သင်ကြားမှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်! - အာကာသသို့သွားရောက်ပင်, သမိုင်းအထင်ကရအဆောက်အနှင့်အတူအနီးကပ်ငါးမန်းတွေနဲ့ငုပ်ရေအောက်တက်ရစာသင်ခန်းနှင့်အုပ်စုငယ်အသုံးပြုရန်တည်ဆောက် Google ကလေ့လာရေးခရီး ဆရာလမ်းတစ်လျှောက်စိတ်ဝင်စားဖို့မြင်ကွင်းများထွက်ညွှန်ပြနေချိန်တွင် 360 °နှင့် 3D ပုံရိပ်တွေ၏ collection များကိုမှတဆင့် "စူးစမ်းရှာဖွေသူများ" ၏စာသင်ခန်းအရွယ်အစားအုပ်စုများဦးဆောင်လမ်းပြနေတဲ့ "လမ်းပြ" အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
• လမ်းညွှန် သင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုကနေဒေသအလိုက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူစာသင်ခန်းအရွယ်အစားအုပ်စုများ။
• Explore တစ်ဦးက Google Cardboard ကြည့်ရှုသူ (http://g.co/cardboard) သို့သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းချပြီးအားဖြင့်စွဲငြိဖွယ်ရာ VR အတွက်လမ်းညွှန်နှင့်အတူသို့မဟုတ် 2D "မှော်ပြတင်းပေါက်" mode မှာတစ်ဦးကို Android tablet ကိုသို့မဟုတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုပါ။
• ခ်ိတ္ဆက္ပါ တူညီသော Wi-Fi ကွန်ရက်ကကိုကျော် devices များ - ထိုလမ်းညွှန်ချက်အချို့လေ့လာရေးခရီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားပြီးလျှင်, တောင်တက် run ရန်လိုအပ်သည်မျှအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိပါ!
• ရှေးခယျြ 200 လေ့လာရေးခရီးကျော်တစ်ကြီးထွားလာစာရင်းထဲက - တစျဦးစီအချက်များနှင့်မေးခွန်းများကိုပြောနေတာ, ဘက်ပေါင်းစုံဖော်ပြချက်နှင့်အတူ VR ပုံရိပ်တစ်ခုပြတိုက်မှူးအစုံပါပဲ။
ဒီ app ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဝန်ဆောင်မှု (ဂူးဂဲလ် ToS, http://www.google.com/accounts/TOS) ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူ Google ရဲ့ယေဘုယျသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ (http://www.google.com/intl / en / မူဝါဒများ / privacy ကို /) နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနောက်ထပ်အသုံးအနှုန်းများ။ ဂူးဂဲလ် ToS အတွက်သတ်မှတ်ထားသောနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှုများအတွက် software များနှင့်စပ်လျဉ်းစည်းကမ်းချက်များဒီ app ကိုသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုလျှောက်ထားအဖြစ်ဒီ app တစ်ခုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာရေးခရီးများပိုမိုလွယ်ကူရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်လမ်းညွှန် * ဆန်းသစ်ထားတဲ့အင်တာဖေ့စ
* Tour ဖန်ဆင်းရှင်ကို အသုံးပြု. ဖန်တီး Tours မှယခုလေ့လာရေးခရီးသုံးပြီးကြည့်ရှုပဲ့ထိန်းနိုင်ပါတယ်
စပိန်, ပေါ်တူဂီ, ပြင်သစ်, အီတလီ, ဂျာမန်, အာရဗီ, ရုရှား, ဟိန္ဒူ, ကိုးရီးယား, ဂျပန်အပါအဝင် 10 အသစ်သောဘာသာစကားများ * ပံ့ပိုးမှု
ယခု 10 အသစ်ထောက်ခံဘာသာစကားများသို့ဘာသာပြန်ထားသော * အများစုကပေါ်ပြူလာခရီးစဉ်
41.46 ကို MB